Nepali Porn Kanda : पुतिभित्रको लाँडो तातो त थियो नै झन् तातो, रनक्क भएर आयो - Nepali Sex Story
Home Sex-Story English Sex-Story Nepali Indian Sex Stories Sex Video Sex Photo Sex chat
Home Nepali Porn Kanda. Nepali sex Kanda nepali pusy nepali sex story Nepali Sex Story in Nepali Nepali Youn Katha Porn Kanda sex kanda nepali Nepali Porn Kanda : पुतिभित्रको लाँडो तातो त थियो नै झन् तातो, रनक्क भएर आयो
Nepali Porn Kanda : पुतिभित्रको लाँडो तातो त थियो नै झन् तातो, रनक्क भएर आयो
Nepali Youn Katha
Hello Nepali Youn Katha Readers,
“आज फर्केपछि बाटोमा माछा खाने, होटेलमा पुगेपछि काँचो मासुपनि खाने”, उनले दौडिरहेको मोटर साईकलमा अझ अगाडी सरेर भनिन् । यसै नै बाईकको सिट मोडिफाई गरेर सिट उठाएको, उनी करिव मेरो सिटको चार भागको एक भागमै अगाडी सरेर आईन । यसो गर्दा उनको दुध मेरो ढाढमा अझै माढियो भने तल पुति मेरो पछाडीको चाकमा डाम्नेगरी आईपुग्यो ।
साँझको झिसमिस भएको थियो । त्यसैले कसैले प्रष्ट देखिने पनि भएर । अगाडी सर्दै उनको एउटा हात मेरो पाईन्टमाथिको लाँडोमै पुर्‍याईसकेकी थिईन । सननन भएर आयो । हामी सहकारीले गठन गरेको ऋण समूह हेर्न जाँदै थियौं ।
“मोबिल नफेरेको पनि निक्कै भयो”, मैले भनें । मेरो ढाढमा उनको दुधको पोकोको घोचाई, पछाडी उनको पुतिको डमाई र उनको हातको औंला नै लाँडोमा परेपछि मेरो लाँडोको सनसनाई झन् बढयो । “निकै पो भयो नि मोबिल नफेरेको ? आज त जति सकिन्छ त्यति पटक कुना कुनादेखि मोबिल फेर्नुपर्छ है”, मैले भनें ।
Mero Bhauju ko Rato Puti chikeko nepali youn katha : Nepali Sex Story
Maile mero Mama ko Chori ko nepali puti chikeko katha
अँध्यारोको फाईदा उठाउँदै लाँडोमाथि सुमसुम्याउँदै पाईन्टमाथि नै भएपनि हल्का थिच्दै भनि, “अनि आफै त मन नगर्ने । हुन त घरमा भईसकेपछि हामलाई बानी पारेर तड्पाउने त हो नि” ।सनसनाईरहेको लाँडोमा पाईन्टमाथि नै खेलाउँदै भनिन् ।“तीन महिना जति पो भएछ नी”, मैले भनें ।“हो त । तीन महिना पनि कटिसक्यो । बानी परेपछि त कस्तो छटपट हुँदो रहेछ भने” ।
“त्यतिकै अफिसदेखि निस्कने कुरा पनि त भएन । मन त नभएको कहाँ हो र” ?उनले टाउको मेरा पछाडीको कुममा राखिन् । यसो हुँदा झन् नजिक भईन् । उनको पुति र दुध झन् मेरो चाक र ढाढ माडियो । उनको हात चाहीँ मेरो लाँडोमा खेलिरहेकै थियो ।
मलाई पनि एक हातले बाईकको हयान्डिल समाएर अर्को हात पछाडी पुरयाएर उनको पुति लेगिज बाहिर भए पनि छुन मन लाग्यो । अलिक सजिलो बाटोमा आएपनि देब्रे हात हयाण्डलबाट हटाएर उनको पुति भएको खुट्टाको खापमा पुरयाएँ । टाईट लेगिज बाहिरै भएपनि उनको पुति सुमसुम्याएँ । उफ … भुक्क … उठेको …. नरम मासु नै मासुको पुति …. कति खेर काम सकेर होटेल दौडौं भयो । त्यति नै बेला पछाडीबाट मेरो गर्दनमा किस गरेर हल्का दाँत गाडिन् ।उनलाई पनि हतारो रहेछ ।
ऋण समूहमा पुगेर आधा घण्टासम्म छलफल गरयौं । फर्कंदा झन् अँध्यारो भईसकेको थियो ।उहीँ अघिकै जस्तो उनको दुध र पुति मेरो ढाढ र पछाडी बेस्सरी माढिने गरी बसिन् र एउटा हात मेरो लाँडोमा राखिन । अर्को हात मेरो छातीमा थियो । उनको तातो शास मेरो गर्धनमा पर्नेगरी चिउडो काँधमा राखिन् । घरी घरी उनको ओंठ मेरो गर्धनमा रगडिएको मैले राम्रै थाहा पाईरहेको थिएँ ।“आज माछा नखाउँ । भोलिमात्रै खाउँ, हुन्न” ? मैले विस्तारै प्रस्ताव राखें ।“अबुई, भोलिपनि यतै बस्ने हो र” ?“यतै त बस्ने । फिल्डमा अर्को ३ वटा गाउँ जानुपर्छ । ठिक्क साँझ पर्दा आईपुग्नुपर्छ”, मैले भनें ।
यसरी गर्छन् कलेज गर्लहरु रोमान्स - nepali lado ra puti chikeko katha
Mero puti chikeko : को को सँग चिकिएन - ब्वाईफ्रेन्ड को अगाडी सर सँग चिक्दा
“ला मैले त एकदिनमै कोठा फर्किन्छु भनेर घरधनीलाई पो भनेर आएको त ।”“घर साहुनीलाई भोलि फोन गरे भईहाल्छ नी ।”“र पनि त उता घरदेखि कोही आईपुगे ? भाई बहिनीहरु आउने कुरा थियो ।”बाटो सजिलो ठाउँमा परेकोले मैले टाउको अलिक घुमाएर उनको ओंठ मेरो गालामा पुरयाएँ र भनें, “मोबिल फेर्ने हतार भयो क्या ।”उनी बोलिनन् । सायद मलाईजस्तै उनलाई पनि हतार थियो ।“कोठा पुगेर नुवाई धुवाई पनि गर्नै पर्छ”, मैले भने ।“ल ठीक छ नि त बाबा रे”, उनले मेरो लाँडोमा थप खेलाउँदै भनिन् । मोटरसाईकल चाहीँ गुढिरहेकै थियो ।होटेल पुगेर हतार हतार आ–आफ्नो कोठामा पस्यौं । नुहाई धुवाई गरेर १५ मिनेटपछि इन्टरकममा कुरा गर्ने सल्लाह भयो ।
१५ मिनेटपछि मैले इन्टरकममा कल गरें । उनले उनको कोठामा आउन भनिन् । म उनको कोठामा गएँ ।कोठामा छिर्नासाथ “कता खाना खाने भनेर सोधिन् ।”“पहिला शरिरको भोक मेटाउँ, अनि पेटको खाना त भईहाल्छ नी हुन्न ?” मैले भनें ।
उनी कोठाको सोफामा वन पिस लाएर बसेकी थिइन् ।
म पनि सोफामै बसेर अंगालोमा बेरिहालें । मुखमा मुख जोडिहाल्यो ।
हामी ४ महिनादेखि तिर्खा मेटाउन पाएका थिएनौं । हाम्रो यौन सम्पर्क शुरु भएको ९ महिना जति हुँदै थियो ।
मुखमा मुख जोडिएपछि हातहरु स्वचालित भईहाल्यो । हातहरुलाई भन्नै नपर्ने । मेरो एउटा हात उसको दुधमा, अर्को हात दुई खुट्टाको कापमा पुगिसकेको थियो । ब्रा लाएकी थिइनन् । त्यसैले सजिलो भयो । उनको चाहीँ एउटा हात मेरो लाँडो र अर्को हात मेरो टाउको र कपाल खेलाउनमा तल्लिन ।
सजिलो होस् भनेर मैले इलास्टिकवाला हाफ पाईन्ट लाएको थिएँ र अन्डरवेयर लाएको थिइन । त्यसैले उनले हाफ पेन्ट नै नफुकाली हात घुसारेर लाँडोलाई खेलाउन थालिन् ।
उनमा शुरुमा अनुभव नभएपनि यो भन्दा अगाडी निकै पटक भ्याएका थियौं । त्यहीँ माथि यस अघि ल्यापटपमा ब्लु हेर्दै गरेका थियौं । उनले ति क्लिपहरु मोबाईलको मेमोरीमा त्यहीँ नराख्नेगरी समेत राखेकी थिइन् । यसैले अनुभवी भई सकेकी थिइन् ।
उनको वन पिसको फ्रक सुर्केर कम्मरसम्म पुगिसकेको थियो । सानो गुलावी रंगको पेन्टी लाएकी रहिछ । पेन्टी सारिदिएँ । उनले पनि फुकालीन् । एक छिन भनेर वन पिस पनि पनि उभिएर निकालिन् । अब उनी पूर्ण नग्न भएर मेरो अगाडी उभिएकी थिईन् । म चाहिँ सोफामा बसेको थिएँ ।
उभि उभि मेरो टाउकोमा हात पुरयाएर उनको पुति नजिक मेरो नाक मुख पुरयाइन् । पुति धोएर हल्का सेन्ट पनि छर्किछिन् । हल्का बासना आयो । अब मैले कुरा बुझ्नु पर्ने भयो । अर्थात उनले उनको पुतिमा मेरो जिब्रो जोड्न खोजेकी थिइन् ।
मैले पनि केही नसोची एउटा हातले उनको चाखमा समाएर तानें । उनी झन नजिक भईन् । यति नजिक कि उनको पुति मेरो मुखमा ठयाक्कै । मैले केही नसोची जिब्रो निकालेर लपक्क पुतिमा चाटिदिएँ ।
“उइइइइइइ ….” उनको मुखबाट निस्क्यो । अलि अलि पानी पनि रसाउन थालिहाल्यो ।
मेरो जिब्रो उनको पुतिमा लपक लपक गरिरहयो । तलदेखि माथि सम्म लपक लपक …. उनी चाही, “उहहह… मरें …. आम्मा…..” भनेर उभी उभी खुट्टा अझै फारिदिईन । फारिमात्रै दिईनन् एउटा खुट्टा कहिले मेरो टाउकोमा राखिन् त कहिले काँधमा, “अहहह ….. उहहह…..” भन्दै राख्थिन् ।
अजय र सहोदर बहिनी उषा को सेक्स चर्तिकला - nepali keti chikeko katha
सानिमालाई चिकेको - mom lai chikeko katha
मैले जिब्रोलाई पुतिको तल्लो भागमा जिब्रोलाई निकै पसाएँ । “उइइइइ….” भन्दै एउटा हात टिसीमा ल्याएर टिसीमा दबाब दिन थालिन् । मेरो जिब्रो टिसीभन्दा तलै थियो ।
“अलिक माथि टिसीमा गर्नु न …. अअअ…” भनिन् ।
मैले वास्तवमा जिस्काईमात्रै रहेको थिएँ । उनले त्यसो भनेपछि मैले टिसीमा जिब्रोलाई खेलाउन थालें । टिसीमा जिब्रोले खेलाउन थालेपछि त उनले चिकाचिक गरेजस्तै चाक हल्लाउन थालिन् । एउटा खुट्टा मेरा काँधमा राखेर तिघ्रा फ्याँ गरिदिएकोले पुतिको मुखपनि मज्जैले उघ्रेको थियो ।
मैले चाहीँ टिसीलाई दुई ओंठले च्यापेर तानें र जिब्रोको टुप्पोले टिसीलाई खेलाईदिएँ ।
“उहहहहहह…… मरें ………….. आम्मा………….. हुहुहुकक…….” भन्दै उभिरहेकी उनी सोफामा बसिन् ।
मैले उसको आँखामा हेरेर सोधें, “के भो ?”
सोफामा बसि बसि तिघ्रा फटाउँदै एउटा हातको औंलाले टिसी खेलाउँदै, “भित्रैदेखि के के केके खलास भयो जस्तो भयो नि त ।” म भुईंको कार्पेटमा बसें । यसैले उनको एउटा खुट्टा तानेर काँधमा राखें ।
वास्तवमा मलाई पनि केटीको फुसीको स्वाद लिने बानी भईसकेको थियो । त्यसैले उनको झरेको फुसी हेर्न र स्वाद लिन पुति नजिकै मुख लगें ।
अलिक बाक्लो पानी … साबुदाना मिसिएको जस्तो सानो सानो सेतो ….. केटी फुसी देखें ।
पुतिको माथिल्लो डिललाई एउटा हातको दुईटा औंलाले हल्का च्यापें । मेरो अर्को हात चाहीँ पछाडी चाकमा पुगेको थियो । उनको एउटा हात मेरो पछाडीको घाँटी र टाउको र अर्को हात आफैंले आफ्नो दुध माडिरहेको ।
“उइइइइ माँ ….” उनको मुखबाट ।
त्यसरी औंलाले च्येप्दा झन् फुसी (योनी रस) झरयो । मैले जिब्रो निकालेर लपक्क चाटें । ओह क्या स्वादिलो .. अलि अलि नुनिलो । अलि अलि गर्मीमा आधा दिन राखेको मासुको गन्धजस्तो …. ओहह ….
“मरें नी माँ …… छिटो न प्लिज ……. त्यो रन्केको मासुको फलामले छिटो चिसो बनाउनु न ….. उइइइइइ ….” उनको आवाज ।
अनि मैले मेरो मुखलाई उनको मुखमा जोडें । यसो गर्दा उनको आफ्नै फुसी (योनी रस) को स्वाद तिनलेपनि चाख्ने छिन् । उनले पनि हतार हतार मेरो मुखमा मुख जोडेर आफ्नै पुतिदेखि निस्केको झोलको स्वाद लिइन् ।
केही बेरको मुख जोडाईपछि म सोफामा बसें । मैले पालो फेर्न त्यसो गरेको थिएँ । लाँडो त रन्केर रनक्कै नै थियो । साथै टुप्पोमा ल्यासेदार पानी पनि आईरहेको थियो । मेरो ठाडो लाँडोलाई हेर्दै उनले हातले समाईन् । अनि छोलेको जस्तो तलमाथि तलमाथि गरिदिईन् ।
त्यसपछि कपाल मिलाउँदै हल्का घोप्टेर लाँडोको टुप्पोमा जिब्रोले हल्का टच गरिन् । यसो गर्दा मलाइ सिरिङ भयो भने मेरो ल्यासीदार रसको पनि मज्जैले स्वाद पाईन् । अनि लाडौंलाई मुखमा च्वाप्पै राखिन् । एकछिन् केही नगरी मुखमामात्र राखिरहिन् । मुखको तातोपनले लाँडालाई पनि तातो भयो । अनि मुखमा तलमाथि तलमाथि गर्दै मुखले लाँडो खेलाईन् । लाँडोको टुप्पोदेखि फेदसम्म दुई ओंठले तलमाथि तलमाथि गरिन् ।
सोफामा बस्दा अप्ठारो भएछ कि के हो, सोफाबाट ओर्लेर कार्पेटमा बसिन् । अनि घुँडा टेकेर फेरि लाँडो मुखमा हालिन् । मेरो एउटा हात उनको दुधमा थियो भने अर्को उनको टाउकोमा । मैले पनि तलदेखि हल्का उचालिँदै उनको टाउकोलाई लाँडोमा दवाब पर्नेगरी हल्लाईदिएँ ।
उनले मुखभित्र लाँडोलाई राखेर जिब्रो लाँडोको टुप्पो वरिपरी यसरी घुमाईन् म, आहहहह ….. ओह …..” भनें ।
“मुखभित्रै नझार्नु है । अझै कहिलेकाही गिदीक गिदीक हुन्छ”, लाँडो मुखबाट निकाल्दै भनिन् ।
“हो र ? अनि अस्ति त अब त स्वाद लाग्न थाल्यो भनेको होइन ?” मैले भनें । थुक जम्मा गरेर लाँडोमा लाउँदै थिइन् ।
“अब त हो नी । र पनि ….. उमममम………” लाँडोको फेदसम्म मुख हुने गरी सबै मुखमा छिराईन् । “ओह माई गड …. अँअँअँ ….”, मेरो मुखबाट निस्क्यो ।
“आह … वाक् ?” मुखको भित्रीसम्म लाँडो पुगेकोले सर्किन ।
लाँडो मुखबाट निकालेर जुरुक्क उठेर म माथि बसिन् । म त सोफामै नै थिएँ । उनी मेरो काखमा बस्न आउँदा उनको पुतिको मुखमै लाँडो जोडियो । उनले नै एउटा हातले लाँडो समाएर हल्का मिलाएर थचक्क मेरो काखमाथि बसिन् । लाँडो पुतिमा स्वात्त पस्यो । लाँडो र पुति पुरै भिजीसकेको थियो । त्यसैले कुनै रोकावट बिना सुलुत्तै भित्र पस्यो ।
उनी चाहीँ “आहहहह ….” आत्तिएकी स्वरमा हल्का कराईन् ।
“के भो ?” मैले भनें ।
“हो र ?”
“निकै दिनपछि पहिलो चोटी गर्दा दुख्छ हो ?”
“खोइ । त्यसो नभए नगरौं त ?” मैले मन चालें । किनभने मलाई थाहा थियो, अब उनी आफै मच्चिने छिन् । मैले फेरि भनें, “त्यसो भए एकछिन यसरी ननिकाली नै बसिरहौं ।”
उनी केही नबोलि मलाई अंगालोमा बेरिन् । कपाल खेलाईन् । ढाँढमा मसाज गरेजस्तो गरिन् ।
मैले पनि उनको दुध चुसें । निप्पललाई जिब्रोले खेलाईदिएँ । मेरो अर्को हात चाहीँ उनको चाकमा थियो । हातले चाक हल्का उचालें । छाडें । उचालें । छाडें । वास्तवमा उनलाई हल्लिने बनाउन यसो गरेको थिएँ । उनले चाहीँ आँखा चिम्म गरेर यी सब मज्जा लिईरहेकी थिइन् ।
“सम्भोग र समाधी भनेको यहीँ होला नी ?” उनले मेरो काननिर फुसफुसाईन् ।
“सायद ।” पुतिभित्रको लाँडो तातो त थियो नै झन् तातो, रनक्क भएर आयो । उनी नै पहिला सक्रिय होस् भनेर म मुनिदेखि नहल्लि थिएँ । उनी भुईँमा टेकी टेकी माथि थिइन् ।
अब उनलाई थप चाहिएको होला । माथि देखि, “आह …. आह ….. हुतुतुतु ……” भन्दै हल्का मच्चिन थालिन् । मैले पनि तलदेखि हल्का उचाल्न थालें । यसरी खुब रिदम मिलाएर कहिले विस्तारै र कहिले अलिक छिट छिटो भयो ।
उनलाई पोजिसन फेर्न मन लागेछ । पुतिबाट लाँडो निकालेर उभी उभी मेरो विपरीत उभिइन् । म तिर चाक पारेर विस्तारै पुतिमा लाँडो समाएर दुलोमा राखिन् । चिप्लो भएकोले फेरि स्वात्तै पस्यो । “उहहह….. आहहह….” यस्तै आवाज आएर मच्चिन थालिन् । मैले पनि तलदेखि नै बसि बसि दे दनादन दिएँ । जीउ चाहीँ अलिक परै थियो । जेहोस् मैले दुबै हात उनको चाखमा समाईरहेको थिएँ ।
एकछिन पछि त्यहीँ पोजिसनमा जीउ नजिक ल्याईन् । यसो गर्दा मेरो छातीमा उसको ढाढ भयो । एउटा हात उनको दुध र अर्को हात पुतिमा पुग्यो । पुति पुरै भिजीसकेको थियो । पानी नै पानी । “उफ ……” त्यहीँ हातको माझी औंलाले पुतिको टीसीमा हल्का दवाब दिंदै तलदेखि ठेल्न थालें । के भयो कुन्नी उनी त झन् मच्चिन थालिन् ।
“एैया …. मारयो …….” भन्दै …. “झन् साह्रो चिक … अझ साह्रो ….” पो भन्न थालिन् । हात टिसी खेलाउँदै पुतिमै थियो । उफ ह्वालह्वाली पानी पो फेरि फालिन् । “ऐया …. गयो … गयो …. पुग्यो” पो भनेर थालिन् ।
एकछिन सबै जीउको भार छाडेर मेरो जीउमाथि परिरहिन् । मेरो हात उही एउटा दुध र अर्को पुतिको टिसीमा । उनले पनि आफ्नो एउटा हात पुतिमा लगिन् । टिसी खेलाईन् । पानी पानी भएकोले हाम्रो दुबै हात चिप्लो पानी पानी भएको थियो । मेरो हात समाएर पुतिमा अझ दवाब पो दिइन्, “उहह उहह …..” भन्दै ।
अनि त औंलाहरुले पुतिको बाक्लो ल्यास्सीदार पानी पुछेर त आफ्नै मुखमा लगेर दुईवटा औंला चाटिन् पो । एकछिन् पछि त अर्को दुईटा औंला अगाडीदेखि नै हात घुमाएर मेरो मुखमा पो ल्याईदिइन् । मैले पनि उनको औंलाहरु चाटिदिएँ । चुसिदिएँ ।
उनी झरिरहँदा मेरो पनि फुसी झर्नै लागेको थियो । उनी झरिहालिन् । त्यसैले मेरो कडा लाँडो पुतिभित्रै थियो । मैले पनि पछाडीबाटै दे दनादन दिएँ । चार पाँच धक्कामै …..
“ओहह….. गयो …. गयो …….” भन्दै मैले भनिरहँदा उनी फुत्त मेरो माथिबाट हटिन् । हतार हतार पिच्कारी छाडीरहेको लाँडोलाई भुईमा बसेर जिब्रोको टुप्पोले हल्का र मिठो टच गरिन् ।
“आह ह ह ….” आवाज निकाल्ने अब मेरो पालो थियो । पिचिक पिचिक फुसी गयो । अलिकति उनको मुखभित्रै … अलिकति गाला, नाकतिर लाग्यो । अलिकति आफैले छातितिर लगेर झारिदिईन् । मलाई भने राम्ररी पाँच मिनेटपनि धक्का नदिई झरिहाल्दा अलिक मज्जा भईरहेको थिईन । मनमनै रातभरी बाँकी छ नि भनेर मन बुझाएँ ।
अनि लाँडोको टुप्पोलाई मात्रै मुखमा क्वाप्प हालिन् र टुप्पोमा जिब्रो लपक्क घुमाईन् । पिचिक्क पिचिक्क गर्दै अन्तिम पिच्कारी उनको मुखमा गयो । मेरो जीउ चाहीँ तनक्क तनक्क भयो ।
शकुन्तलाको मालिस गर्दा पुतीमा आँखा पुगो - chikeko kathaharu
भाउजू र छोरी सँग चिकेको कथा - nepali chara katha
छिमेकी सरसंग चिकाउंँदा - Nepali Sex With Teacher
“ओह …… ”
उनी उठिन् र फेरि अघिजस्तै मेरो काखमा बसिन् । लाँडो सिथिल हुन थालिसकेको थियो । उनको पुति पनि पानी नै पानी थियो । अलिली पानी मेरो तिघ्रा र फिलामा पनि लागेको थियो ।
म माथि बसेर लामो टंग किस गरिन् । उनको मुखको फुसी र रयाल मेरो मुखमा पोखिदिईन् । मैले पनि जिब्रो उनको जिब्रो वरिपरी खेलाईदिएँ । एउटा हात उनको पुतिमा थियो । “कति धेरै पानी झरेछ” भने … सायद अहिलेसम्म यति धेरै पानी झरेको याद गरेको थिइन । अर्को हात चाहीँ उनको दुधमै सलबलाईरहेको थियो ।
उनको चाहीँ एउटा हात मेरो ढाढमा मिठो तरिकाले मसाज गरिरहेकी थिइन् भने अर्को हात कपालभित्र मसाज गरिरहेकी थिइन् । मुखचाहीँ जोडिरहेकै थियो । जिब्रोमा जिब्रो खेलिरहेको थियो ।
मेरो मुखबाट मुख हटाएर मेरो गर्दन, घाँटी चुमिन् । त्यसपछि कस्तो अचम्म मेरो पनि छातीको दुधको टुप्पामा पो जिब्रोले खेलाईदिइन् । मैले, काउकुति लाग्यो भन्दै हाँसे ।
“हाम्रोमा जिब्रोले खेलाउँदा चाहीँ हुने …..” भन्दै उनले जिब्रोले खेलाईरहिन् । ओह कति काउकुति लाग्दो रहेछ ।
“अनि आज कस्तो लाग्यो त ?” मैले सोधें ।
“चार महिनामा गरेर हो कि के हो ? धेरै पटक र धेरै झरेको जस्तो लाग्यो ।” मेरो छातीमा टाउको राख्दै भनिन् ।
“मलाई पनि तेस्तै लाग्यो । आज धेरै पानी (फुसी) बग्यो, मैले भनें । मेरो त छिटो झरयो ।””मलाई किन हो ? त्यो गरेको भन्दा तपाईंले चाटेको बेला झरेको थाहा हुन्छ । गरेको बेला त अस्ति त्यति दिन गर्दा पनि अलि अलि मात्र थाहा हुन थालेको थियो । आज पनि पछिमात्रै थाहा भयो ।” लुत्रुक्क परेको लाँडोलाई समाएर तलमाथि गर्दै भनिन् ।
“हि..हि… यो त कति सानो भयो ?” टुप्पोमा हल्का औंलाले स्पर्श गर्दै भनिन् । टुप्पोको फुसी र पानी अझै थियो । औंलाले दलेर औंला त आफ्नो मुखमा पो लाईन् ।
“विस्तारै थाहा हुन्छ । गरेको मज्जा लाग्छ कि चाटेको ?” मैले फेरि सोधें ।
“दुइटै मज्जा हुन्छ । झरेको बेला चाहीँ स्वर्गीय आनन्द नै हुने रहेछ । गर्दा शुरुमा हल्का दुख्छ तर त्यो नै आनन्दको दुखाई हुँदो रहेछ ।”
उनी काखमै भएकोले एउटा हात गर्धनतिर र अर्को हात फिलादेखि चाखतिर बेरेर बोक्नलाई तैयार गरें । सानो र स्लिम जीउ भएकोले बोक्न गाह्रो थिएन । उनले पनि मेरो गर्धनमा दुबै हातले बेरेर बोकाउनलाई तैयार भईन् । दुबै सर्वाङ्ग नांगो थियौं । जुरुक्क बोकेर खाटमा राखें । लम्पसार पारें । घोप्टिएर मुखमा किस गरें । एकछिन जिब्रो नै लपक लपक चाटाचाट भयो ।
उनले दुबै हातले मेरो टाउको बेरिन् ।
त्यसपछि दुबै दुधमा पालै पालो घोप्टेरै जिब्रोले खेलाएँ । यसबेला चाहीँ मेरो कपालमा उनको हात थियो । अनि अन्तिममा पुतिमा किस गरें । अझै पानी पानी थियो । टिसीमा जिब्रोले हल्का टच गरेर लपक लपक लपक चाटें । उनले तलदेखि बुरुक्क जीउ उठाईन् । अनि टिसीलाई दुई ओंठले विचमा राखेर हल्का तानें । “उइइइइइ …” उनको मुखबाट निस्क्यो । उनले सुति सुति मेरो लाँडो समाउन खोज्दै थिइन् ।
“ल यो इपिसोड चाहीँ खाना खाएपछिका लागि एडभान्स भो,” मैले भनें ।
उनी चाहीँ मलाई तान्दै थिइन् । मैले, “राती साढ ८ बज्न थालिसक्यो । फेरि पेट शान्त गर्न पाईँदैन ।”
“यो शान्त भएपछि पेट शान्त पार्न पर्दैन भनेको होइन त ?” मेरो लाँडोलाई हातले खेलाउँन खोज्दै भनिन् ।
मैले चाहीँ उनको हातबाट फुत्काएर नांगै बाथरुममा छिरें । पुरा सफा गरिन । किनभने जीउदेखि चिकाचिक गरेको गन्ध आओस भनेर नै मन आयो । किनभने बेयरा केटीहरुलाई थाहा दिनु न थियो ।
बाथरुमदेखि निस्कँदा उनी वन पिस लाउँदै थिइन् । ब्रा र पेन्टी चाहीँ भुँईमै थियो ।
Nepali Porn Kanda. Nepali sex Kanda nepali pusy nepali sex story Nepali Sex Story in Nepali Nepali Youn Katha Porn Kanda sex kanda nepali
Nepali Youn Katha - Facebook
Popular Youn Katha
Nepali Sex Katha : म १६ वर्ष पुगेकी तरुनी
Nepali Sex Katha : म १६ वर्ष पुगेकी तरुनी Hello Nepali Youn Katha Readers, बैसाख जेठको गर्मीमा केटीहरुलाई कुखुरा पालुं कि पोईला जाउं जस्तो हुन्छ भन्थे सांच्चै त्यस्तै भएको थियो मलाई । कोठाभित्र गुम्सिएर म अनेक रंगीन कल्पनामा डुब्दै थिएं । मेरो शरिरमा पातलो सुतीको म्याक्सी मात्र थियो । म्याक्सीभित्र पेण्टी र ब्रा फुकालेर मिल्काई सकेकि थिएं । एक त गर्मीले गर्दा शरिरमा टाँसिने कपडाहरु लगाउनै नसकिने त्यसमाथी यसरी रोम रोम रोमाञ्चित हुने कल्पनाको रंगीन संसारमा डुब्दा मलाई त्यस्ता कपडाहरुले अवरोध खडा गरेको महसुस हुने गर्छ । पढ्नको लागी खोलेको किताब खुल्लै मेरो पेटमाथी घोप्टो परेर नाईटोमा मुख जोतिरहेको थियो । म यौटा हातले म्याक्सी माथी बाटै आफ्नै छाती खेलाईरहेकि थिएं । मलाई आफैंले छाती खेलाउंदा थोरै दुख्ने गरेर स्तनको मुण्टो निचार्यो भने आनन्द लाग्छ – त्यसैले पनि होला मेरो छातीको गोलाई र स्तनको मुण्टो निक्कै सप्रेको निबुवा जस्तो ठुलो ठुलो भएको । म उत्तानो परेर बिछ्यौनामा मडारिईरहेकि थिएं । मडारिने क्रममा तलबाट म्याक्सी सुर्किईएर पेट सम्म आएको थियो । म अर्को हातले भने बाक्लिएर कालो ह
भाउजू र छोरी सँग चिकेको कथा - nepali chara katha Hello Nepali Youn Katha Readers, ऊ सानैदेखि मसँग खुब चल्थी । पछाडिबाट आएर पलाई भ्वाक्क हिर्काएर हिड्थी । सारै चञ्चले थिई कबिता । म जागिरे भएको दुई वर्षपछि गाउँबाट काठमाडौं फर्कदा ऊ त्यतिखेर घरमा थिइन । मैले पहाडबाट सुन्तला जुनारसहितका सिजनको फलफूल लिएर गएको थिएँ । कबिता खोइ भाउजू भन्दै म उसको घर पुगें ।”ओहो समीर बाबु पो” भन्दै घिमिरिने भाउजू निस्किइन । मैलै आफूले ल्याई दिएका फलफूल थमाएँ । घिमिरिनी भाउजू त्यतिखेर पातलो गाउनमा थिइन । उनका छातीमाथि पहिलो पटक नजर पुग्यो । “ओहो कति ठूला दूध” अनायस मेरो मुखबाट निस्क्यो । “क्या हो समिर बाबु त जागिरे भएपछि जे पायो त्यही बोल्न थाल्नु भएछ” कोपिला नाम गरेकी भाउजू अनमस्क हुदै जवाफ फर्काइन । ओ हो मैलै त बोल्न नहुने कुरा बोलेछु भन्दै म लाज र ग्लानीले भुतुक्क भएँ र फर्कन थाले । “समिर बाबु कहाँ हिड्नु भएको म चिया बनाएर ल्याउँछु” भन्दै कोपिला भाउजू भित्र भान्सातिर लागिन । म भने उनीहरुको ड्रइङ रुममै बसेर पर्खन थालें । Also Read Buda hospital gaye paxi ko mero romanchak chikeko story Bhauju la
अजय र सहोदर बहिनी उषा को सेक्स चर्तिकला - nepali keti chikeko katha Hello Nepali Youn Katha Readers, दश वर्षअघि काठमाडौं अहिले जस्तो व्यस्त थिएन। माइक्रोबस त आएकै थिएन, ट्रली बसहरु चल्थे, साझा बसले सेवा दिइरहेको थियो। दिउँसो सीमित ठाउँहरुमा पुग्ने गरी विक्रम टेम्पो चल्थ्यो, डल्ले पेट्रोल टेम्पो पनि थियो– मध्यम आय हुनेहरुको ट्याक्सी। मिटरमा चल्थ्यो। राति साढे आठ बजेपछि बस, टेम्पोहरु चल्दैन थिए। रात्रि जीवन त थियो, तर धनीमानीको मात्र। ट्याक्सी स्ट्यान्डमा थोरैमात्र ट्याक्सी हुन्थे। ९ बजेपछि ती पनि ग्यारेजमा जान हतार गर्थे। अजय, पढाईसँगै रोजगारीका लागि काठमाडौं आएको ३ वर्ष बितिसकेको थियो। पश्चिम नेपालमा माओवादीको जगजगी थियो तर देशको राजधानी भएकाले काठमाडौं सुरक्षित नै थियो। ऊ न्यूरोडको एक कलरल्याबमा दिउँसो एकाउन्टेन्टको काम गर्थ्यो भने बिहान मीनभवन क्याम्पसमा पढ्थ्यो। मंसिर महिना लागिसकेको थियो। काठमाडौंमा असोजदेखि नै जाडो सुरु हुन्छ, मंसिरमा जाडो बढ्न थालिसकेको हुन्छ। अझ त्यो दिन किन हो कुन्नी दिउँसैदेखि सिमसिमे झरी परिरहेको थियो। “आज त मौसमले च्यालेन्ज गरेको छ यार” सँगै काम ग
शकुन्तलाको मालिस गर्दा पुतीमा आँखा पुगो - chikeko kathaharu Hello Nepali Youn Katha Readers, मेरो नाम रमेश हो, अहिले म २२ वर्षको भएँ । भाग्यका खेल भनुम् आजकल म रोजगारीका लागि साउदीमा छु । यो घटना आजभन्दा तिन वर्ष पहिलेको हो । त्यतिखेर म बौद्धको कार्पेट फ्याक्ट्रीमा काम गर्थेँ । बहिनी सकुन्तला भख्खर एसएलसी देयर पढ्न आकी थिइ । सानो कोठामा दुई जना बस्थिम । पुरानो खालको घर थियो, ट्वाइलेट बाहिर थियो । बाहिर एकदम काइ लागेको थियो । असारको बेलामा पानी खुब परो । शकुन्तला ट्वाइलेट जाँदा चिप्लेर लडिछे । उसको हरमा निकै चोट लागेछ । रूँदै आई , के भो भनेको लडेर हर खुस्को भनी । खाटमा सुत् भनेँ र सुरूवाल खोलेँ, दाहिने हरमा चोट लागेको रैछ । खानेतेल लगाएर मालिस गरिदिएँ ।शकुन्तलाको हर मालिस गर्दा गर्दै उसको पुतीमा आँखा पुगो । चिसो रैछ । कट्टु मै मुतिस की क्या हो भनेँ , हैन भनेर उसले सुरूवाल माथी तानी । तेतिखेरसम्म मेरो लाडो सन्किसकेको थियो । पख न काँ उठेकी, भनेर समातेँ । हेर आगो को छेउमा घिउ पग्लिन्छ, तेरो देखे पछी मलाई अति भयो देन ……..भनेँ । धेत दाइ के भनेको अरूले था पाए भने के गर्ने……भनेर
Nepali SEX Story : भर्जिन केटि लाई खालि लाडो ले चिकेको
Hello Nepali Youn Katha Readers, नयाँ नयाँ स्वद लिने क्रममा मैले पहिलो चोटि भ्ार्जिन केटि लाई चिक्ने शभ अवसर प्राप्त गरे । सुनेर अचम्म मान्नु हुन्छ होला तपाई हरु तर यो यर्थाथ कुराहो कुनै पनि पुरुषको कटि प्रति चाहाना राख्दा भर्जिन केटि होकि होइन भन्ने कुरामा जहिले पनि ससंकित हुने गर्दछन । अलिकती मेरो वारेमा भन्नुपर्दा म अली चन्चले स्वभावको र सिलिम सरीरको जवान केटा म विहान ±२ मा पढाउछु र दिउसो विकास वैको कर्जा साखाको पदमा कार्यरत छु मेरो थुप्रइ केटि साथिहरु छन् तर तिनी हरुलाई हेरेर चित्त वुझाउनु वायक मसंग अरु उपाय छैन किनकि चिक्नी कुरा भनेको त्यस्तो जटिल कुराहो जुन कुरा विना दुवैको र्समर्थन बिना गारो हुन्छ त्यस माथि सदै भेटघाट हुने केटि साथि संग त्यस्तो कुराको प्रस्थाव राख्दा कतै मित्रतानै टुट्ने होकि भन्ने डर र आफनो प्रोफेसन मा दाग लाग्ने होकि भन्ने डर भरखर २६ वर्षलागेको म हर्ेदापनि आर्कसक तर अलि लजालू स्वभावका कारण केटि हरुलाई त्यस किसिम को प्रभाव पार्न अलिकठिन नैथियो म जोकोहि केटि लाई हेनुपरेमा उस्को दुध वाट हर्ेन सुरु गर्छर्ुु कलेजमा कपि चेक प्राय सदै जसो गर्दछु कपि चेक गर्न जाद
छिमेकी सरसंग चिकाउंँदा - Nepali Sex With Teacher Hello Nepali Youn Katha Readers, मेरो नाम जमुना माया मोक्तान हो। म अहिले 20 वर्षकी भएं। यो कुरा आजभन्दा 1 वर्ष अघिको हो। त्यसबेला जुन घटना हुन गयो त्यही घटना आज म यहाँ लेख्दैछु।कसम यो एउटा सत्य घटना हो। त्यतिखेर मलाई साह्रै पुती चिलाउने गर्थ्यो तर के गर्नु त्यस बेलासम्म चिकेको भने थिएन ।तर एकदिन त्यो दिन पनि आयो जुनदिन मैले मज्जाले चिकाउन पाएं।तपाईं पनि यही आइडिया प्रयोग गरेर चिक्न र चिकाउन सक्नु हुन्छ होला ।तर एउटा कुरो के हो भने साथी कसले पो तेरो पुती चिलाएछ ला मेरो लाडो तेरो पुतीमा हाल भनेर देला त?कसैले दिदा पनि दिदैन ।कसैले चिकौँ भनेर पनि आउदैन त्यसका लागि त आफैंले आइडिया लगाएर केटालाई भन्न जान्नुपर्छ अनि मात्र चिक्न पाइन्छ । तर केटाहरू पनि चिक्न पाएपछी त के कुनै हल्ला गर्दैन अनि त आहा कति मोज।कसैले थाहा पनि नपाउने आफुलाई मज्जा पनि हुने।तपाईं पनि यहीँ आइडिया लगाएर चिकाउनु होला है साथीहरू जून आइडिया यसप्रकार छ। कुरा के थियो भने मेरो घर नजिकै एकजना छिमेकी थियो।उहाँ पेशाले शिक्षक हुनुहुन्थ्यो । उहाँलाई हामी राजन सर भनेर बोलाउथ्
Mero puti chikeko : को को सँग चिकिएन - ब्वाईफ्रेन्ड को अगाडी सर सँग चिक्दा Hello Nepali Youn Katha Readers, म साह्रै नै प्यासी र पुरुषहरुको फरक फरक आकारको लिङ्ग/लाडो चाखी हिड्नु पर्ने बिबाहित आईमाई । पुरुष को संगत बिना आफुलाई कन्ट्रोल मा राख्न पनि हम्मे हम्मे पर्थ्यो मलाई । यी सब हुनुको पछाडी बुढो विदेश मा भएको ले होला भन्ठान्नु होला ! तर त्यसो होइन, म घरमा बुढा हुँदा पनि बुढालाई छलेर विभिन्न पुरुष साथि हरु संग आफ्नो प्यास मेटाउने गर्थें । बुढाले मेटाउन नसकेको यौन प्यास म अरु बाटै प्राप्त गर्दथें । अब म एक पटक घटेको रोमान्चक सेक्स घटना तपाई हरु सामु राख्न जाँदै छु । बिबेक मेरो केटा साथी, जस संग मेरो प्राय यौन समागम हुने गर्दथ्यो । बिबेक अलावा अरु पुरुष संग पनि मेरो चिकामारी चल्थ्यो, कहिले नजिकै स्कुल पढाउने सर संग त कहिले पुलिस संग त कहिले बजारका केटा हरु संग, इत्यादि । एकदिन सर र म सेक्स को प्लानिङ्ग मा थियौं । सर र म कोठामा वेलुकी रमाइलो गर्ने क्रममा तैयारी खानेकुरा देखि सबै सामान लिएर आयौं र कोठामा बस्यौं । हामी दुबै जना फ्रेस हुने भन्दै वाथरुम मा गयौं, त्यो विवेकले खाट मुनी
About Nepali Youn Katha
This blog contains explict content in words only you will not find any adult or X-Rated Images or Videos in this blog. All the content are Nepali Youn Katha, Stories in Nepali and English. Nepali Chikeko Katha is for fun and Entertainment only ! You can contact us through younnepal@gmail.com.
Labels - Nepali Youn Katha
Nepali Sex Story in English
Nepali Sex Story in Nepali
All the Nepali Sex Stories in this blog are fictional and if the matches to you than it is entirely coincidental. All the Images are non-adult and are downloaded from Google. If you think the post are not good enough and should be deleted than comment on that post, we will remove it. Thanks !!
Copyright (c) 2020 Nepali Youn Katha All Right Reseved
© Copyright 2019 Nepali Sex Story. Designed by Bloggertheme9. Powered by Blogger.